Mamorona mandala mora foana amin'ity fitaovana maimaimpoana ity | Famoronana an-tserasera
Mamorona mandala mora foana amin'ity fitaovana ity
Camila Exposito | | Fitaovana famolavolana
Mandala noforonina niaraka tamin'ny fitaovana Mandalator.
Ny lazan'ny Mandala dia nitsangana tato anatin'ny taona vitsivitsy noho ny fampiasany matetika ao boky fandokoana olon-dehibesatria mety ho tena pahasalamana mandoko azy ireo, saingy tsy dia mora loatra ny mamorona azy ireo amin'ny rangotra. Na eo aza izany dia fanatanjahan-tena tena mahaliana ny fiezahana hamorona mandala, ary izy ireo dia namorona fitaovana samihafa hiteraka mandala tokana hifanaraka amin'ny tsirairay.
Na dia tandindona ara-panahy bodista an'ny fialam-boly, ny mandala dia endrika be mpampiasa amin'ny famolavolana sy ny fanoharana ankehitriny, satria misy a fifandanjana tonga lafatra eo anelanelan'ny organika sy ny geometrika, ny boribory ary ny sisiny.
1 Ahoana ny fomba hamoronana mandala?
2 Amboary ny mandala anao
Ahoana ny fomba hamoronana mandala?
Ny mandala dia mazàna amin'ny endriny boribory misy ambaratonga concentric marobe amin'ny endrika samihafa. Matetika izy ireo no mampiasa loko mazava be ary manintona, izay tena mahavariana ny endrika farany ary mety hitovy amin'ny vera na zavatra mitovy amin'ny voninkazo.
Sary - Freepik.
Amin'ity indray mitoraka ity no itondrako anao ity fitaovana an-tserasera ity maimaim-poana izay ahafahanao manintona ny mandala anao ary misintona azy na mandoko azy amin'ny endrika nomerika namboarinao. Ny fitaovana Mandalator Mora be ny mampiasa azy, mizara ny efijery ho triangles maromaro izay manapaka faribolana concentric, mba hahafahantsika manao ny famolavolana ao anaty iray monja ary hahitana ny fomba itomboany amin'ireo triangles hafa amin'ny tena izy. Manoro hevitra ireo mpangataka hampiasa ny fizarana triangles valo hanombohana, fa tsy hanafoanana ny safidy Grid afaka manana traikefa malalaka indrindra amin'ny famoronana mandala isika raha tsy misy torolàlana manelingelina.
Amboary ny mandala anao
Ny loko, ny haben'ny teboka ary ny famerimberenana ny lamina dia azo namboarina tanteraka mba hahazoana ny endrika biolojika sy mahaliana indrindra azontsika eritreretina. Ho an'ny vokatra tsara indrindra dia atoro anao ny fampiasana a takelaka sary. Raha manana an'io ianao dia hanampy anao hifehy tsara kokoa ny tsipika ary hahazo valiny tsara kokoa. Somary somary ambanivohitra aho ary azo hatsaraina, saingy mazava ho azy mamporisika anao aho hanandrana an'ity fitaovana ity. Afaka tena fitsaboana Ary afaka mamorona zavatra tena tsara hanonta sy handoko amin'ny tanana ianao.
Ny mandala noforoniko niaraka tamin'ny Mandalator.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Mamorona mandala mora foana amin'ity fitaovana ity
Fanovana bebe kokoa amin'ny logo Slack: amin'ity indray mitoraka ity dia fotsy fotsy
Famoronana sary tsy azo atao izay mampiseho biby rehefa tsy misy olona mijery azy ireo